ओलीले गरिब जनताको पक्षमा सुरुगरेको निसुल्क डाईलाइसिस सेवा-जानकारीको लागि सेयर गरौँ ~ Khabardari.com
ओलीले गरिब जनताको पक्षमा सुरुगरेको निसुल्क डाईलाइसिस सेवा-जानकारीको लागि सेयर गरौँ
गत वैशाख ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मिर्गौला फेल भएका बिरामीलाई साताको दुईपटकका दरले आजीवन निःशुल्क डायलासिस सेवा दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसको करिब साढे दुई महिनापछि मात्रै अस्पतालहरूले डायलासिस सेवा निःशुल्क गर्न थालेका हुन् । वीर अस्पतालले साउन १२ गतेदेखि सातामा दुईपटकका दरले डायलासिस सेवा निःशुल्क गरेको छ ।
वीर अस्पालतमा अहिले दैनिक २० जनाले निःशुल्क डायलासिस सेवा लिइरहेका छन् । अनिल, मनकलाजस्ता मिर्गौला फेल भएर लामो समयदेखि डायलासिस गरिरहेका बिरामीको अनुहार पहिलेभन्दा तेजिलो हुन थालेको छ । तर उनीहरू आफ्नो जीवन बचाउने दीर्घकालीन उपाय भने मिर्गौला प्रत्यारोपण नै भएको बताउँछन् । त्यसका लागि आफूहरूसँग पैसा नभएकाले सरकारले नै सहयोग गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
'सरकारले निःशुल्क डायलासिस गरेर राम्रो निर्णय गरेको छ । यसले हामीजस्ता रोगीको जीवनको रक्षा पनि गर्छ', डायलासिसको पालो कुरिरहेका स्याङ्जाका झङ्गनाथ शर्माले भने, 'तर प्रत्यारोपण सेवालाई सहज बनाएर निःशुल्क गरिदिने हो भने हामीजस्तालाई झन् अर्थ राख्नेछ ।'
लामो यात्रा तय गर्दै काठमाडौं छिरेर डायलासिसका लागि पैसा जोहो गर्दा पाएको दुःख सम्झिँदा उनलाई नरमाइलो लाग्छ । 'उहाँ सरकारी जागिरबाट अवकाश हुनुभएको हो र पनि डायलासिसको पैसा जुटाउन हामीलाई हम्मेहम्मे हुन्थ्यो', उनकी पत्नी यमुनाले भनिन्, 'यहाँ त अधिकांश केही पेसा नभएका बिरामी आउँछन् । उनीहरूको हालत के भयो होला ? '
वीर अस्पतालजस्तै अहिले मुलुकका विभिन्न ३५ भन्दा धेरै डायलासिस केन्द्र र अस्पतालमा बिरामीले मिर्गौलाको डायलासिस सेवा लिइरहेका छन् । उनीहरूले ती सबै केन्द्रबाट निःशुल्क सेवा पाएका छन् कि छैनन् भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले समयमै अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अस्पतालका नेफ्रोलोजिस्ट डा. अनिल बराल सरकारले निःशुल्क गरेपछि डायलासिस गराउन चाहने बिरामीको संख्या बढे पनि त्यसअनुसार मेसिन नहुँदा कठिनाइ भइरहेको बताउँछन् ।
वीरमा हाल १० वटा मेसिनबाट बिरामीलाई मिर्गौलाको डायलासिस सेवा दिइएको छ । अस्पताल परिसरमै जापान सरकारले निर्माण गर्न लागेको भवनमा ३० वटा मेसिन जडान गरी मिर्गौला डायलासिसको सेवा दिने योजना छ । नेपालमा बर्सेनि मिर्गौला फेल हुनेको संख्या करिब तीन हजार रहेको चिकित्सकको अनुमान छ ।
मिर्गौला फेल हुनुको मुख्य कारण मधुमेहलाई मानिएको छ । स्वस्थ जीवनशैली अपनाएमा मधुमेहबाट बच्न सकिने र त्यसबाट पर्ने दीर्घकालीन असरबाट पनि जोगिन सकिने चिकित्सकको सल्लाह छ ।